Navotsotra rehefa avy nigadra dimy taona an-tranomaizina noho ny fanompana ny fitondram-panjaka i Tom Dundee, mpihira nentin-drazana Thailandey sady mpikatroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2019 4:34 GMT
Vakio amin'ny teny русский, ਪੰਜਾਬੀ, Español, English
Namoaka lahatsarin-kira i Tom Dundee taorian'ny famotsorana azy tany am-ponja. Loharano: YouTube
Nalaina tao amin'ny Prachatai, tranokalam-baovao mahaleotena ao Thailandy, ity lahatsoratra nasiam-panitsiana ity ary naverina navoaka indray eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Miresaka momba ny mpihira sady mpikatroka fanta-daza malaza iray izay nogadraina noho ny Lese Majeste na ilay lalàna hanenjehana izay manevateva ny mpanjaka ny lahatsoratra. Mampihatra ny lalànan'ny Lese Majeste henjana i Thailandy izay nampiasan'ny governemanta miaramila ho iray amin'ireo fitaovana ara-pitsarana hanenjehana ireo mpitsikera taorian'ny nandrombahany fahefana tamin'ny taona 2014.
Navoaka tao amin'ny fonjan'i Remand ao Bangkok vao mangiran-dratsy ny alahady 17 Jolay 2019 i Tom Dundee, na i Thanat Thanavacharanon. Nigadra am-ponja nandritra ny 5 taona ity mpihira ity noho ny lèse majesté .
Taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana May 2014, nosamborina ny 9 Jolay 2014 i Tom Dundee noho ny tsy nanaovany tatitra tany amin'ny NCPO [Vaomiera Nasionaly ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana – anaran'ny governemanta tohanan'ny miaramila]. Voasazy higadra 10 taona sy 10 volana an-tranomaizina izy noho ny fiampangana roa araka ny andininy faha-112 ao amin'ny ady heloka bevava — lalànan'ny lèse majesté
Nahazo famelan-keloka avy amin'ny mpanjaka izy nandritra ny fanomezana satroboninahitra ny Mpanjaka Vajiralongkorn, ary nahena ho dimy taona ny saziny.
Raharaha efatra no niampanga azy tany am-piandohana araka ny andininy faha-112, saingy nolavina ny roa tamin'izany. Tsy fahita firy ny fanafoanana noho izy niaiky heloka. Nanazava ny fitsarana fa tsy manan-kery ny fiaikeny heloka satria tsy hita fa meloka izy .
Nifototra tamin'ny kabary roa nataony nandritra ny hetsi-panoherana nataon'ny lobaka mena izay navoaka tao amin'ny YouTube teo anelanelan'ny taona 2013-2014 ny raharaha roa izay nanagadrana azy saingy nandalo dingana roa samy hafa ireo raharaha. Niakatra fitsarana sivily ny iray, raha natolotra ny tribonaly miaramila teo ambany Didin'ny NCPO kosa ny iray hafa satria tsy maintsy ho entina eo anatrehan'ny tribonaly miaramila ireo heloka bevava mifandraika amin'ny fiarovam-pirenena izay nitranga taorian'ny fanonganam-panjakana. Tsy zava-dehibe loatra ny fahasamihafana satria mifototra amin'ny fotoana nahafantaran'ny manampahefana izany ny datin'ny heloka bevava.
Nifototra tamin'ny kabary nataony tamin'ny 6 Novambra 2013 ny raharaha voalohany, ary navoaka an-tserasera ny androtr'iny ihany. Nilaza ny manampahefana fa tamin'ny 22 Jona 2014 no hitan'izy ireo no ny lahatsary, iray volana taorian'ny fanonganam-panjakana, nentina teo anoloan'ny fitsarana miaramila noho izany ny raharaha. Nifototra tamin'ny lahateny nataony ny 13 Novambra 2013 ny raharaha faharoa ary navoaka tao anaty aterineto ny andron'iny ihany. Ny 26 Aprily 2014 no nahitan'ny manampahefana izany, noho izany, eo anoloan'ny fitsarana sivily no nitondrana ny raharaha.
Nofoanana ny Didy navoakan'ny NCPO mikasika ny raharaha momba ny fiarovam-pirenena raha vantany vao nanao fianianana ny kabinetra ny 16 Jolay 2019.
Teraka tao amin'ny fianakaviana mahantra, nianatra nandritra ny 6 taona tany Frantsa i Tom Dundee ary niverina tany Thailandy mba ho mpanakanto malaza. Nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana lobaka mena izy tamin'ny taona 2010 rehefa maro ireo mpanao fihetsiketsehana namoy ny ainy. Nitarika azy hanao lahateny tany amin'ny faritany samihafa ny herisetra ara-politika mandra-pigadrany noho ny fandikana ny lalàna lèse majesté.
Tamin'ny antsafa tamin'ny herintaona, nilaza izy fa namorona hira maherin'ny 3.000 tany am-ponja mba hamonoana fotoana, indraindray mamorona hira 4 ka hatramin'ny 5 isan'andro avy amin'ny zavatra niainany tany am-ponja sy ireo tantara nolazain'ireo voafonja hafa taminy izy. Nosoratany an-taratasy ireo hira ireo ary nalefany taty ivelany saingy nifanehatra tamin'ny dingana fitiliana tao amin'ny fonja izany. Hatreto, tsy afaka nanontany olona momba ny niafaran'izany izahay.
Taorian'ny famotsorana azy, nilaza i Tom Dundee fa feno fankasitrahana izy noho ny fanohanana azy sy mila azy ny demaokrasia hiady ho amin'izany ny demokrasia.
Isaorana ny fampahalalam-baovao, isaorana ny fonja, isaorana ireo olona rehetra voakasika sy ireo namana izay tonga nampahery ahy ary nanao ezaka mba hifohazako maraina. Misaotra ny zava-drehetra tamin'ny lasa, misaotra ireo sakana, olana ary misaotra noho ny fijaliana, satria mino aho fa avy amin'ny fijaliana ny fahasambarana. Tsy afaka mahita fahasambarana ianao raha tsy misy fijaliana. Misaotra an'ireo rehetra niady niaraka tamiko.
Raha tsy misy afa-tsy voa-pasika iray monja ny tora-pasika dia tsy azo lazaina hoe tora-pasika, satria tokony ho feno fasika ny tora-pasika. Avy amin'ny vahoaka no hananganana ny demokrasia, sa tsy izany? Tsy afaka atsangana avy amin'ny olona iray monja ny demokrasia. Tokony ho demokraty ny vahoaka rehetra ao amin'ny firenena. Tahaka ny tora-pasika tsy maintsy manana voa-pasika maro, mila ny vahoaka ihany koa ny demokrasia.
Nihira ny famotsorana azy i Tom Dundee mandra-pitomaniny mafy ka tsy afaka nihira izy.
An-taonany maro aho no tany an-tranomaizina. Ry hava-malalako, mila ho vaky ny foko. Malahelo ilay zanako kely famihinako aho. Malahelo mafy ny reniny mafy.